1 Samuel 26 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Samuel Nhoma a Edi Kan 26:1-25
Dawid san nyaa Saul nso wankum no (1-25)
Dawid nyaa obu maa nea Yehowa asra no (11)
26 Akyiri yi, Sif+ mmarima baa Saul nkyɛn wɔ Gibea+ bɛkae sɛ: “Dawid abehintaw wɔ Hakila bepɔw a ɛne Yesimon* di nhwɛanim no so.”+ 2 Ɛnna Saul ne Israel asraafo 3,000 a wɔapaw wɔn siim kɔɔ Sif sare so. Wɔkɔe sɛ wɔrekɔhwehwɛ Dawid wɔ Sif sare so.+ 3 Saul soɛɛ kwankyɛn wɔ Hakila bepɔw a ɛne Yesimon di nhwɛanim no so. Saa bere no, na Dawid te sare no so, na ɔtee sɛ Saul aba sare no so rebɛhwehwɛ no. 4 Enti Dawid somaa nkurɔfo sɛ wɔnyɛ kodɛɛ nkɔhwɛ sɛ Saul aba hɔ ampa anaa. 5 Akyiri yi, Dawid kɔɔ baabi a Saul akɔsoɛ no. Ná Saul ne Ner ba Abner+ a ɔyɛ ne sahene no ada, na Dawid kohuu baabi a wɔda; baabi a na Saul da no, na n’asraafo no atwa ne ho ahyia. 6 Ɛnna Dawid bisaa Hitini+ Ahimelek ne Seruia+ ba Abisai+ a ɔyɛ Yoab nua no sɛ: “Hena na ɔne me bɛkɔ Saul nkyɛn wɔ asoɛe hɔ?” Abisai kae sɛ: “Me ne wo bɛkɔ.” 7 Enti Dawid ne Abisai kɔɔ asraafo no mu anadwo, na wɔkɔtoo sɛ Saul ada wɔ asoɛe hɔ, na ne peaw si fam wɔ n’atifi. Ná Abner ne asraafo a wɔatwa ne ho ahyia no nyinaa adeda. 8 Ɛnna Abisai ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Onyankopɔn de wo tamfo ahyɛ wo nsa nnɛ.+ Enti mesrɛ wo, ma memfa peaw nwɔ no baako pɛ nsi fam, meremfa nwɔ no mprenu.” 9 Nanso Dawid ka kyerɛɛ Abisai sɛ: “Nyɛ no bɔne. Hena na obetumi de ne nsa aka nea Yehowa asra no+ afa ne ho adi?”+ 10 Dawid toaa so kae sɛ: “Sɛ́ Yehowa te ase yi, Yehowa ankasa bekum no;+ anyɛ saa nso a, ne bere bɛso+ ama wawu, anaa ɔbɛkɔ ɔko ama wɔakum no.+ 11 Ɛmpare me sɛ mɛhwɛ Yehowa anim ateɛ me nsa ayɛ nea Yehowa asra no bɔne!+ Enti mesrɛ wo, fa peaw a ɛwɔ n’atifi no ne nsu toa no ma yɛnkɔ.” 12 Ɛnna Dawid faa peaw ne nsu toa no fii Saul atifi, na wosii kwan so kɔe. Obiara anhu wɔn,+ na obiara nso ante wɔn nka, na obiara annyan efisɛ na wɔn nyinaa adeda; Yehowa na ɔma wɔdaa hatee. 13 Afei Dawid twaam kɔɔ ɔfã noho kogyinaa akyirikyiri wɔ bepɔw no so; ná ɔne wɔn ntam twe. 14 Ɛnna Dawid teɛɛm frɛɛ asraafo no ne Ner ba Abner+ sɛ: “Abner, enti merefrɛ yi wonte?” Abner buae sɛ: “Ɛyɛ wo hena na worefrɛ ɔhene yi?” 15 Dawid ka kyerɛɛ Abner sɛ: “Wonyɛ ɔbarima anaa? Hena na ɔte sɛ wo wɔ Israel? Ɛnde adɛn na woantumi anwɛn wo wura ɔhene? Asraafo no mu baako baa hɔ sɛ anka ɔrebekum wo wura ɔhene.+ 16 Moanyɛ ade koraa. Sɛ́ Yehowa te ase yi, mofata owu, efisɛ moantumi anwɛn mo wura a Yehowa asra no no.+ Afei monto mo ani nhwɛ! Ɔhene peaw ne ne nsu toa+ a na esi n’atifi no, ɛhe na ɛwɔ?” 17 Ɛnna Saul hui sɛ ɛyɛ Dawid nne, na obisae sɛ: “Me ba Dawid, wo nne na mete yi anaa?”+ Dawid buae sɛ: “Me wura ɔhene, me nne na wote yi.” 18 Ɔtoaa so kae sɛ: “Adɛn nti na me wura retaataa n’akoa yi?+ Dɛn na mayɛ, na me bɔne ne dɛn?+ 19 Enti afei, mesrɛ wo, me wura ɔhene, tie w’akoa asɛm a mereka yi: Sɛ Yehowa na ɔrepiapia wo tia me a, ma onnye* me nsam aduan afɔre. Na sɛ ɛyɛ nnipa nso na wɔrepiapia wo a,+ ɛnde wɔadome wɔn wɔ Yehowa anim, efisɛ nnɛ wɔapam me sɛ wɔremma minnya kyɛfa biara wɔ Yehowa agyapade mu,+ na wose, ‘Kɔ, kɔsom anyame foforo!’ 20 Na afei mma me mogya nnhwie nngu baabi a ɛnyɛ Yehowa anim, efisɛ sommɔre baako pɛ+ na Israel hene afi adi rehwehwɛ me sɛnea ɔrepam akokɔhwerew wɔ mmepɔw so.” 21 Ɛnna Saul kae sɛ: “Mayɛ bɔne.+ Me ba Dawid, san bra na merenyɛ wo bɔne bio, efisɛ woama me nkwa* asom bo ama wo+ nnɛ. Hwɛ! madi nkwaseasɛm, na madi mfomso kɛse.” 22 Dawid kae sɛ: “Ɔhene peaw no ni, ma mmerante no baako mmra mmegye. 23 Yehowa na obetua obiara ka sɛnea onii no trenee ne ne nokwaredi te,+ efisɛ ɛnnɛ Yehowa de wo hyɛɛ me nsa, nanso mamfa me nsa anka nea Yehowa asra no.+ 24 Hwɛ! Sɛnea ɛnnɛ wo nkwa* asom bo wɔ m’ani so no, saa ara na ma me nkwa* nsom bo wɔ Yehowa ani so, na onnye me mfi ahohia nyinaa mu.”+ 25 Saul ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Nhyira nka wo, me ba Dawid. Nea ɛte biara wobɛyɛ nnwuma akɛse, na ɔkwan biara so wubedi nkonim.”+ Ɛnna Dawid siim kɔɔ ne kwan, na Saul nso san kɔɔ baabi a ofi bae.+
^ Ebetumi nso akyerɛ, “sare no.”
^ Nt., “onhuam.”